Qorshihii Diiwaangelinta Codbixiyeyaasha oo Tub Toosan Haysta iyo Qaybo Xukuumadda Ka Tirsan oo Kolba Isbaaro u Dhigaya – W/Q: Dr Maxmed Fadal | Somaliland Post
Home News Qorshihii Diiwaangelinta Codbixiyeyaasha oo Tub Toosan Haysta iyo Qaybo Xukuumadda Ka Tirsan...
Qorshihii Diiwaangelinta Codbixiyeyaasha oo Tub Toosan Haysta iyo Qaybo Xukuumadda Ka Tirsan oo Kolba Isbaaro u Dhigaya – W/Q: Dr Maxmed Fadal
Wada shaqaynta saddexda xisbi qaran waxay muujisay bisaylka Hay’adaha dimuqraadiga Somaliland. Waxay si xirfadaysan oo deggan ay uga wada shaqeeyeen sidii ay u kala saari lahayeen talana uga gaadhi lahaayeen laba diiwaangelinood oo kala ujeeddo ah oo madaxa la isu geliyey: Diiwaangelinta Codbixyaha iyo ta Madaniga ah. Ta codbixiyuhu waa diiwaangelin siyaasi ah oo doorasho xor iyo xalaal ah loogu diyaargaroobo. Ta Madaniga ahi waa diiwaangelin maamulka iyo horumarka loo adeegsado oo hadii ay siyaasadowdo way nashuushadoobaysaa. Sida kale ee ay u kala ujeeddo yihiin waa, iyadoo ta codbixiyuhu sida doorashada wakhti kooban lagu qabto, iyadoo tan madanigu ay wakhti dheer oo sannado ah u baahantahay si dadka oo dhan loo wada gaadho oo ka dhashay iyo ka gaboobay ee aan midna soo kici karayn halkooda loogu tago, sawirna laga qaado.
Geeddisocodkii Go’aaminta Qabashada Diiwaangelinta Codbiyeyaasha
Iyadoo lagu talo goosanayo arrimaha kor ku qoran ayaa waxa la go’aansaday in labada diiwaangelinood ay kala ujeeddo iyo jadwalba yihiin sidaa daraadeedna la kala saaro oo laba waddo kala qaadaan, midna ay hirgeliso Komishanka Doorashooyinka Qaranku, ta kalena ay hirgeliso Wasaaradda Arrimaha Guduhu. Waxa Go’aanka isla qaatay: saddexda xisbi qaran, Komishanka Doorashooyinka Qaranka, iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Go’aankaas waxa iyana dhinacooda ka danaynayey deeqbixiyeyaasha oo talaabo talaabo ula socday sida ay hay’adihii qaranku xilkaas si midaysan ugu wada qorshaynayaa.
Afar qoraal oo ay wada saxeexeen Komishanka Qaranka, Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo saddexda Xisbi Qaran, ayey u direen deeqbixiyeyaasha oo usoojeediyeen in go’aanka sare ee ah isbarbar socodka iyo in mudnaanta kowaad la siiyo Diiwaangelinta Codbixiyeyaasha mar haddii wakhtigii doorashadu kaabiga inagu soo hayo oo ah badhtamaha 2015ka. Waxa iyana xusid mudan in Wasaarradda Qorhsyanta Qaranku sidoo kale ku dartay qorshaha horumarka ay deeqbixiyeyaasha la wadaagto in Diiwaangelinta Codbixiyeyasshu ay mudanaanta kowaad leedahay. Sidoo kale Guddida Golaha Wakiilada ee Badbaadada Gudaha iyo Difaaca ayaa iyana ku qabatay Hotel Maansoor dood balaadhan oo ay daneeyeyaasha isugu yeedhay warbaahintana si toos ah looga sii daayey oo iyana gunaanad keedo ahaa in Diiwaangelinta Codbixiyeyaasha mudnaanta kowaad la siiyo si aan dib u dhac ugu iman doorashada 2015ka.
Marka halkaa la marayo ayey deeqbixiyeyaashu dalbadeen in warqad madaxweyne lagu soo xidho go’aankan si dhaqaalhiisa iyo hawgalkiisaba la isula ogaado loona wada qorsheeyo. Madaxweynuhu warqaddii wuxu soo qoray 17/11/2013 isagoo weliba si faahfaahsan u waafaqay go’aannadaas hay’adaha qaranku wada qaateen – waxaan ka xusayaa cutbkan sida qeeaxan u qoran:
“18kii bishii Septambar waxay si midaysan u go’miyeen Komishanka Dorashoyinka Qaranka, Wasaaradda Arrimaha Gudha iyo Xisbiyad qaranku, in laba waddo oo isbarbarsocda la kala mariyo Diiwaangelinta Codbixiyeyaasha iyo Diiwaangelinta Madaniga ah, sidaasaanay noqonaysaa oo la raacaayaa. Jidkaas oo keliya ayey Jamhuuriyadda Somaliland ku fulin kartaa doorashooyin demuqraadi xor iyo xalaal ah oo ku dhaca wakhtigooda 2015, iyadoo isla markii la diyaarinayo habka salka loogu dhigayo wareegyada doorashooyinka mustaqbalka.”
Marka ay heleen Deeqbixiyeyaashu, warqaddan Madaxweyne, waxay si kama dambayn ah u sameeyeen qorshihii ay Somaliland ku hirgelin lahayd Diiwaangelinta Codbixiyeyaasha oo ka bilaabmay in ay qandraas ku bixiyaan daraasad lagu baadhayo: qiimaha ay ku kici karto iyo sida ugu haboon ee lagu samayn karo Diiwaangelin dhaxalgal noqota oo inala korta kana badbaadda dhibaatooyinkii tii hore ragaadiyey ee akhirkiina sababay in la iskaba xooro.
Qorshaha waxa ka mid ah: 1) In daraasaddu soo dhamaato natiijadeedana la soo bandhigo 17ka bishan Janaury ee aynu ku jirno 2) in wafti ka kooban Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Komishnanka Qaranka iyo saddexda Xisbi Qaran ay Nairobi ugu tagaan deeqbixiyeyaasha, si hawlgalkii kama damabaysta ahaa ee qabashada Diiwaangelinta Codbixiyeyaasha loo soo dhameeyo. 3) Waxa qorshaha ku jirta in ay qabsoonto Diiwaangelinta Codbixyeyaashu bisha April ee sannadkan, 2014ka, oo natiijadeedu ay diyaartahay inta ka horaysa bisha December ee sannadkan.
Haddaba, waxa la yaab leh in dhowaanaha ay ka soo yeedhayaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha hadallo khilaafsan tacabkaa midaysan ee Somaliland hay’adaheeda u sareeya ee Madaxweynuhu ka mid yahay ay caalamka la galeen. Wasaaraddu waxay ku andacoonaysaa in ay Diiwaangelin Madani ah ay 8 bilood ku dhammanayso oo ay iyadu kharashgaraynayso. Wasaaraddu way u madaxbanaantahay goorta iyo habka ay u qabanayso Diiwaangelin Madaniga, ee waxa ku dheeraad ah in ay ka hortimaaddo qabashada Diiwangelinta Codbixiyeyaasha, oo ay ku andacooto in iyadu liiska kama dambaynta ah ee codbixiyeyaasha ay ka soo saarayso Diiwaangelinta Madaniga ah ee ilaa maanta aan bilaabmin, sannadana qaadaynaysa, doorasha aaan lagu xidhi Karin. Waxa intaa dheer in ay taasu khalkhal gelinayso wada shaqayntii iyo midhihii hay’adaha qaranak u sareeya ay gaadheen, isla markiina ay weji gabax innagu tahay in ay maqalaan caalamkii heshiiyada lala galay ee Go’aanada Madaxweynahana haystaa.
Dagaal maanta lagu qaado in qorshaas hay’adah qaranka oo ka mid tahay Wasaaraddasu ay la galeen Deeqbixiyeyaasha caalamka, waxa loo arakyaa in ay tahay ku talagal in doorashada si badheed dib looga rido sannadka 2015ka oo ay muddo kordhis Madaxweyne loo gurguuranayo. Jidkaas dhibka iyo halaagga bandanna hore ayeynu u soo maranay oo maanta mid cuntamaya ma aha ee Wasaaraddu dibin daabyada ha ka dayso horusocodka dimuqraadiyadda Somaliland taas oo ay degganaashaha iyo ictiraafkeeduba ku xidhanyahay.
1. Somaliland qaddarin bay kaga heshay Deeqbixyeyaasha iyo saaxiibada caalamka habkan midaysan ee ee ay hay’adaheeda doorashada ku lug lehi, Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Xisbiyada Qaranka iyo Wasaaradduba ay u maamuleen arrimaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo tan Madaniga iyo in ay isha mar walba ku hayaan in aan doorashada 2015ka aanay dib u dhac ku iman.
2. Warqadda tafatiran ee Madaxweynuhuna waxay dhaabadaysay u midaysnaanta Somaliland in doorasho ah dimuqraadi oo xor iyo xalaal u dhacdo 2015k, taas oo ay sal u tahay qabashada Diiwaangelinta Codbixiyaha iyadoo ta Madaniga ahna goonideeda ay u barbarsocoto. Madaxweynhu wuxuu qoraalkaas ku ballanqaaday in dwaladdiisu diyaar u tahay wixii masuuliyad dhaqaale iyo qabanqaabada kaga soo hagaaga qabashada Diiwaangelinta Codbixiyaha. Waxaanuu arrintaa u xilsaaray Wasiirka Arrimaha Dibedda.
3. Somaliland iyo Deeqbixiyeyaasha mid waliba wuu qaatay xilkiisii, sidaas baana qorshe lagu sameeyey kaas oo ah in ay dhacdo Bisha April ee 2014, natiijadeeduna ay diyaar tahay inta ka horaysa dhammaadka bisha 12naad ee sannadkan. Waxay diyaarinayaan Deeqbixiyaashu dhaqaalaha ku baxaya badankiisa oo aynu garanayno in uu malaayiin doolar yahay. Waxa kale oo taasu si toos ah ugu gogol xaadhaysaa in doorashooyinku ku qabsoomaan wakhtigooda 2015ka.
4. Waxa ka go’an xisbiyada qaranka in ay Diiwaangelin Codbixiyuhu mid dhaxalgal oo nadiif ah ay noqoto markan. Waxay isku raacsanyhiin in qalabka casriga oo loo yaqaan “biometric” la isticmaalo si uu xalaal u noqdo. Waxay xisbiyadu ku qanacsanyihiin in maanta qalabka jiraa uu baahida si sugan u dabooli karo, iaydoo waaya aragnimadii laga helay jabkii kii horena laga faa’iidaysanyo.